သံခြောငျး အတုအစဈ ဘယျလို ခှဲကွမလဲ….. – Nyi Ma Lay
သံခြောငျး အတုအစဈ ဘယျလို ခှဲကွမလဲ…..
မွနျမာ့စကားပုံမှာ အတုက တထောငျ အစဈကတယော ကျဆိုတဲ့ စကားပုံရှိပါတယျ။ ဟုတျပါတယျ။ အစဈဟာနာမညျရ လာပွီဆိုလြှငျ အတုပေါငျးမြား စှာပျေါလာတတျပါတယျ။ အတုနှငျ့ အစဈမှာ ဘယျအတု ကမှ အစဈထ ကျကောငျး တယျဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့အိမျေ ဆာကျပစ်စညျးေ ရာငျးဝယျရေးလော ကဟာအပွိုငျအဆို ငျမြားလှတဲ့လော ကတခုဖွဈပါတယျ။
ဈေးကှကျ ဆိုတာ Red Ocean နဲ့ Blue Ocean ဆိုပွီးရှိနေ တာဖွဈွ ပီး ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အိမျဆောကျပစ်စညျးလောက ဟာဆိုရငျ Red Ocean ဖွဈပါတယျ။ ဒီနရောမယျ Red Ocean ကိုရှငျးပွရ မယျဆိုရငျ Red Ocean ဟာ ဈေးနှုနျးအပွိုငျအ ဆိုငျမြားပွီး အတိုကျ အခိုကျမြားတဲ့ေ ဈးကှကျဖွဈပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့အိ မျဆောကျပစ်စညျးေ ရာငျးဝယျမှုလု ပျငနျးဟာလဲ ဈေးနှုနျးအွ ပိုငျအဆိုငျ၊ ဝနျဆောငျမှုအပွိုငျအဆိုငျပွငျးထနျတဲ့ဈေးကှကျဖွဈပါတယျ။ သံခြောငျးဈေး ကှကျမှာ နိုငျငံခွားကနေ တိုကျရိုကျတငျသှ ငျးရောငျးခတြဲ့ Import သံခြောငျးမြား ရှိသလို၊ ဒီကစကျမှုဇုံမှာပဲ ထုတျတဲ့ Local သံခြောငျးဆိုပွီး နှဈမြိုးနှဈစားရှိပါတယျ။
လကျရှိဖွဈနတေဲ့ သံခြောငျး အတုအစဈကိစ်စကတော့ နိုငျငံခွား ကလာတဲ့ သံခြောငျး တံဆိပျမြားကို Local စကျရုံမှာပဲ စကျမှုဇုံထုတျ သံခြောငျးတှမှောအ သားတံဆိပျွ ပနျရိုကျပွီး အျောသံခြောငျး (Original သံခြောငျး) ဆိုပွီးဈေးကှကျ ထဲရောငျးခနြကွေ တာပဲဖွဈပါတယျ။
HRB-400, HRB-500 သံခြောငျးအ စဈမြားထကျ အဆိုပါ အသားတံဆိပျပွ နျရိုကျထားတဲ့ သံခြောငျး ကပိုပွီးဈေးသကျသာပါတယျ။ Local ထုတျသံခြောငျး ထကျဈေးမြားပါတယျ။ တကယျတမျး မှာတော့ အဆိုပါအသား တံ ဆိပျပွနျရိုကျပွီး ရောငျးနတေဲ့သံေ ခြာငျးမြားဟာ Local ထုတျသံေ ခြာငျးမြား သာဖွဈပါတယျ။ အတုကိုအ စဈလို့ထငျပွီး ဝယျလိုကျရတဲ့ Customer မြားအတှကျ အလှနျပဲထိခိုကျနဈနာပါတယျ။
ဟုတျပါတယျ။ အနာသိရငျဆေးရှိရစမွဲပါပဲ။ ဒီလိုအတုအစဈခှဲနညျးကို ကြှနျတျောတငျပွပေးပါ့မယျ။ အလှယျကူဆုံးနညျးလမျးကိုပွောပွပေးပါ့မယျ။ အခုကြှနျတျောပွောပွမယျ့ အခကျြ(၆)ခကျြကို မူတညျပွီး အတုအစဈခှဲခွားနိုငျပါတယျ။
သံခြောငျးမြားရဲ့ ဘေးမှာပါတတျကွတဲ့ ဖောငျးလုံးမြားကိုရငျးနှီးကွမယျထငျပါတယျ။ သံခြောငျးအတုမြားရဲ့ ဖောငျးလုံးဟာ အျောသံခြောငျး (Original သံခြောငျး)မြားထကျပိုပွီး ကွီးတတျကွပါတယျ။
(၂) စာလုံးပုံ (Font) မတူခွငျး
အျောသံခြောငျးမြားအပျေါမှာရေးထားတဲ့ စာလုံးပုံ (Font) နဲ့ ဒီမှာပွနျပွီး အသားတံဆိပျရိုကျထားတဲ့ စာလုံးပုံမြားဟာ ကှာခွားပါတယျ။ အျောသံ‌ခြောငျးမြားရဲ့ စာလုံးပုံကပိုသပျရပျပွီး သံခြောငျးအတုမြားကတော့ စာလုံးပုံလကျရာကွမျးပါတယျ။
(၃) Chemical Composition
သံခြောငျးတုမြားရဲ့ အရောငျမြားဟာ ဖွူစပျစပျဖွဈနပေါတယျ။ ဒီလိုဖွဈရတာကတော့ ပါဝငျတဲ့ Chemical Composition မမှနျလို့ဖွဈရတာပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သံခြောငျးတုမြားရဲ့ကုနျကွမျးဟာ အျောသံခြောငျးမြားရဲ့ ကုနျကွမျးလို သံရိုငျး ကနလေုပျတာမြိုးမဟုတျပဲ Scrap Metal လို့ချေါတဲ့ သံဟောငျးမြားကနပွေနျလညျအရညျကြိုပွီး လုပျထား တာဖွဈပါတယျ။
ဒီအတှကျကွောငျ့ ကွံ့ခိုငျမှုပိုငျးမှာ အရမျးကိုကှာခွားပါလိမျ့မယျ။
သံခြောငျး တုမြားဟာ ကွံ့ခိုငျမှုပိုငျးမှာ အငျမတနျမှအားန ညျးလှပါတယျ။ အထကျမှာပွောခဲ့သလို Scrap Metal ကနပွေနျလညျပွုလုပျထားတဲ့အတှကျကွောငျ့ ကွံ့ခိုငျမှုပိုငျးမှာ အားနညျးပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သံခြောငျးတေ ခြာငျးခငျြးစီရဲ့ ကွံ့ခိုငျမှုပိုငျးမှာလဲ တခြောငျးနဲ့တခြောငျးကှာခွားနပွေနျပါတယျ။
သံခြောငျးတုမြားရဲ့ Bundle (သံခြောငျးအစီး) ရဲ့ ထိပျနှဈဖကျဟာညီနတေတျပါတယျ။ အျောသံခြောငျးမြားကတော့ Bundle မညီတတျကွပါဘူး။
အျောသံခြော ငျးမြားရဲ့အရော ငျကတော့ သံရောငျေ ပါကျတတျသလို ညိုပွာပွာဖွ ဈတတျပါတယျ။ Import အဖွဈတငျသှငျးရတာဖွဈပွီး သငေ်ျဘာတှရေဲ့ Bulk Shipment တှနေဲ့လာ ရတာဖွဈတဲ့ အတှကျ ရဒေဏျေ လဒဏျနဲ့ သံခြေးအ နညျးငယျတတျတာ မြိုးရှိတ တျပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ သံခြောငျးတုမြားကတော့ အရောငျအသှေးပိုငျမှာလှတတျပါတယျ။ သံခြေးလဲမပါတတျပါဘူး။ အဆိုပါအခကျြ (၆) ခကျြကို ကွညျ့ပွီး သံခြောငျးအ တုနဲ့အစဈကို ခှဲခွားနိုငျပါတယျ။ Credit.
မြန်မာ့စကားပုံမှာ အတုက တထောင် အစစ်ကတယော က်ဆိုတဲ့ စကားပုံရှိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ အစစ်ဟာနာမည်ရ လာပြီဆိုလျှင် အတုပေါင်းများ စွာပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ အတုနှင့် အစစ်မှာ ဘယ်အတု ကမှ အစစ်ထ က်ကောင်း တယ်ဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အိမ်ေ ဆာက်ပစ္စည်းေ ရာင်းဝယ်ရေးလော ကဟာအပြိုင်အဆို င်များလှတဲ့လော ကတခုဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးကွက် ဆိုတာ Red Ocean နဲ့ Blue Ocean ဆိုပြီးရှိနေ တာဖြစ်ြ ပီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းလောက ဟာဆိုရင် Red Ocean ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမယ် Red Ocean ကိုရှင်းပြရ မယ်ဆိုရင် Red Ocean ဟာ ဈေးနှုန်းအပြိုင်အ ဆိုင်များပြီး အတိုက် အခိုက်များတဲ့ေ ဈးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အိ မ်ဆောက်ပစ္စည်းေ ရာင်းဝယ်မှုလု ပ်ငန်းဟာလဲ ဈေးနှုန်းအြ ပိုင်အဆိုင်၊ ဝန်ဆောင်မှုအပြိုင်အဆိုင်ပြင်းထန်တဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သံချောင်းဈေး ကွက်မှာ နိုင်ငံခြားကနေ တိုက်ရိုက်တင်သွ င်းရောင်းချတဲ့ Import သံချောင်းများ ရှိသလို၊ ဒီကစက်မှုဇုံမှာပဲ ထုတ်တဲ့ Local သံချောင်းဆိုပြီး နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါတယ်။
လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ သံချောင်း အတုအစစ်ကိစ္စကတော့ နိုင်ငံခြား ကလာတဲ့ သံချောင်း တံဆိပ်များကို Local စက်ရုံမှာပဲ စက်မှုဇုံထုတ် သံချောင်းတွေမှာအ သားတံဆိပ်ြ ပန်ရိုက်ပြီး အော်သံချောင်း (Original သံချောင်း) ဆိုပြီးဈေးကွက် ထဲရောင်းချနေကြ တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
HRB-400, HRB-500 သံချောင်းအ စစ်များထက် အဆိုပါ အသားတံဆိပ်ပြ န်ရိုက်ထားတဲ့ သံချောင်း ကပိုပြီးဈေးသက်သာပါတယ်။ Local ထုတ်သံချောင်း ထက်ဈေးများပါတယ်။ တကယ်တမ်း မှာတော့ အဆိုပါအသား တံ ဆိပ်ပြန်ရိုက်ပြီး ရောင်းနေတဲ့သံေ ချာင်းများဟာ Local ထုတ်သံေ ချာင်းများ သာဖြစ်ပါတယ်။ အတုကိုအ စစ်လို့ထင်ပြီး ဝယ်လိုက်ရတဲ့ Customer များအတွက် အလွန်ပဲထိခိုက်နစ်နာပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ အနာသိရင်ဆေးရှိရစမြဲပါပဲ။ ဒီလိုအတုအစစ်ခွဲနည်းကို ကျွန်တော်တင်ပြပေးပါ့မယ်။ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကိုပြောပြပေးပါ့မယ်။ အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့် အချက်(၆)ချက်ကို မူတည်ပြီး အတုအစစ်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
သံချောင်းများရဲ့ ဘေးမှာပါတတ်ကြတဲ့ ဖောင်းလုံးများကိုရင်းနှီးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ သံချောင်းအတုများရဲ့ ဖောင်းလုံးဟာ အော်သံချောင်း (Original သံချောင်း)များထက်ပိုပြီး ကြီးတတ်ကြပါတယ်။
(၂) စာလုံးပုံ (Font) မတူခြင်း
အော်သံချောင်းများအပေါ်မှာရေးထားတဲ့ စာလုံးပုံ (Font) နဲ့ ဒီမှာပြန်ပြီး အသားတံဆိပ်ရိုက်ထားတဲ့ စာလုံးပုံများဟာ ကွာခြားပါတယ်။ အော်သံ‌ချောင်းများရဲ့ စာလုံးပုံကပိုသပ်ရပ်ပြီး သံချောင်းအတုများကတော့ စာလုံးပုံလက်ရာကြမ်းပါတယ်။
သံချောင်းတုများရဲ့ အရောင်များဟာ ဖြူစပ်စပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရတာကတော့ ပါဝင်တဲ့ Chemical Composition မမှန်လို့ဖြစ်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သံချောင်းတုများရဲ့ကုန်ကြမ်းဟာ အော်သံချောင်းများရဲ့ ကုန်ကြမ်းလို သံရိုင်း ကနေလုပ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ Scrap Metal လို့ခေါ်တဲ့ သံဟောင်းများကနေပြန်လည်အရည်ကျိုပြီး လုပ်ထား တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအတွက်ကြောင့် ကြံ့ခိုင်မှုပိုင်းမှာ အရမ်းကိုကွာခြားပါလိမ့်မယ်။
သံချောင်း တုများဟာ ကြံ့ခိုင်မှုပိုင်းမှာ အင်မတန်မှအားန ည်းလှပါတယ်။ အထက်မှာပြောခဲ့သလို Scrap Metal ကနေပြန်လည်ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ကြံ့ခိုင်မှုပိုင်းမှာ အားနည်းပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သံချောင်းတေ ချာင်းချင်းစီရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှုပိုင်းမှာလဲ တချောင်းနဲ့တချောင်းကွာခြားနေပြန်ပါတယ်။
သံချောင်းတုများရဲ့ Bundle (သံချောင်းအစီး) ရဲ့ ထိပ်နှစ်ဖက်ဟာညီနေတတ်ပါတယ်။ အော်သံချောင်းများကတော့ Bundle မညီတတ်ကြပါဘူး။
အော်သံချော င်းများရဲ့အရော င်ကတော့ သံရောင်ေ ပါက်တတ်သလို ညိုပြာပြာဖြ စ်တတ်ပါတယ်။ Import အဖြစ်တင်သွင်းရတာဖြစ်ပြီး သင်္ဘောတွေရဲ့ Bulk Shipment တွေနဲ့လာ ရတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ရေဒဏ်ေ လဒဏ်နဲ့ သံချေးအ နည်းငယ်တတ်တာ မျိုးရှိတ တ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သံချောင်းတုများကတော့ အရောင်အသွေးပိုင်မှာလှတတ်ပါတယ်။ သံချေးလဲမပါတတ်ပါဘူး။ အဆိုပါအချက် (၆) ချက်ကို ကြည့်ပြီး သံချောင်းအ တုနဲ့အစစ်ကို ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ Credit.
Previous post ခန်ဓာကိုယျမှာ အလုပျအမြားဆုံး အစိတျအပိုငျးတဈခုဖွဈတဲ့ အသညျး ကို ပွနျလညျသနျ့စငျခွငျး
Next post ရှေးမွနျမာ ရာဇဝငျတှေ ထဲက ကလေးစဈသားမြား…..